ပဒိယဒိုရရာဇမဟာဝိဟာရ - ဝီကီပီးဒီးယား
පදියදොර රජ මහා විහාරය
The ruined Stupa
07°23′52.8″N 81°15′08.1″E﻿ / ﻿7.398000°N 81.252250°E﻿ / 7.398000; 81.252250ကိုဩဒိနိတ်: 07°23′52.8″N 81°15′08.1″E﻿ / ﻿7.398000°N 81.252250°E﻿ / 7.398000; 81.252250
Archaeological protected monument (10 October 2014)
ပဒိယဒိုရရာဇမဟာဝိဟာရ (ပဒိဒိုရရာဇမဟာဝိဟာရ ဟုလည်း သိကြ, သီဟိုဠ်: පදියදොර රජ මහා විහාරය) သည် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ၊ Padiyathalawa မြို့တွင် တည်ရှိသည့် ရှေးဟောင်းဗုဒ္ဓဘာသာကျောင်းတော်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ ကျောင်းတော်သည် Mahiyangana မြို့မှ ၃၄ ကီလိုမီတာခန့် (၂၁ မိုင်) အကွာ Peradeniya – Chenkaladi - Badulla အမြန်လမ်း (A5) ပေါ်တွင် တည်ရှိသည်။ ကျောင်းတော်ကို သီရိလင်္ကာနိုင်ငံအစိုးရက ရှေးဟောင်းသုတေသနနယ်မြေတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ၎င်းကို ၂၀၁၄ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁၄ ရက်နေ့တွင် အစိုးရဂေဇက်အမှတ် ၁၈၈၄ တွင် ကြေညာခဲ့သည်။
ကျောင်းတော်ကို Kavan Tissa (205–161 BC) လက်ထက်တွင် တည်ဆောက်ခဲ့သည်ဟု ယုံကြည်ရသည်။  ယခုအခါတွင် ယိုယွင်းပျက်စီးနေပြီဖြစ်သည့် ဘုရားတစ်ဆူသည် မြေကမူတစ်ခုနှင့် အုတ်အကျိုးအပဲ့အစအနနံရံတစ်ခုကဲသို့သာ ဆင်တူလျက်ကျန်ရှိတော့သည်။ ဘုရားစေတီ၏ အနီးအနားတွင် ဗုဒ္ဓ၏ ရုပ်ပွားတော်တစ်ခုရှိပြီး ၎င်းမှာ အမြင့် ၄ ပေ (၁.၂ မီတာ) ရှိသည်။ အနီးအနားရှိ အဆောက်အဦမှာမူ ယခုအခါတွင် ပျက်စီးနေသည့်အနေအထားဖြစ်ကာ ရဟန်းအိုများထားရှိရာကျောင်းဆောင် Dharmachakra ဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြသည်။ ကျောင်းတော်၏ ကျန်ရှိနေသည့် အပျက်အစီးအကြွင်းအကျန်များတွင် ကျောက်သားတံခါးတစ်ခုနှင့် ကျောက်တိုင်များ တွေ့ရှိရပြီး ၎င်းသည် ကျောင်းတော်၏ ပရဝုဏ်နယ်မြေအဖြစ် သိရှိနိုင်သည်။ ကျောင်းတော်တွင် တည်ရှိနေသည့် ဗောဓိပင်ကို ဒေသခံ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသည် ကြည်ညိုကြပြီး ဤအပင်သည် အနုရာဒပူရမြို့ရှိ ဇေယျာသီရိမဟာဗောဓိ၏ ပင်ပျိုပင်တစ်ပင် ဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။
"PART I : SECTION (I) — GENERAL Government Notifications" (10 October 2014). The Gazette of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka 1884.
↑ Withanarachchi၊ Chandana Rohana (2005)။ පෞරාණික ස්ථාන සහ ස්මාරක: අම්පාර දිස්ත්‍රික්කය (Ancient places and monuments: Ampara District) (စင်ဟာလာဘာသာစကားဖြင့်)။ Department of Archaeology (Sri Lanka)။ p. 29။ ISBN 955-9159-44-5။
↑ Padiyadora Rajamaha Viharaya – පදියදොර ඓතිහාසික පුරාණ රජමහා විහාරය။ amazinglanka။7September 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ President makes historic visit to Padiyathalawa။ Associated Newspapers of Ceylon Limited (2 July 2007)။7September 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ပဒိယဒိုရရာဇမဟာဝိဟာရ&oldid=643353" မှ ရယူရန်
CS1 စင်ဟာလာ-ဘာသာစကား ရင်းမြစ်များ (si)
ဤစာမျက်နှာကို ၂၆ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁၊ ၁၂:၁၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။